Cabdi Qaybdiid oo ka hadlay weerarka lagu qaaday hoygiisa – STAR FM SOMALIA
Cabdi Qaybdiid oo ka hadlay weerarka lagu qaaday hoygiisa
Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii lagu qaaday hoyga uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho.
Ciidan hubeysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin kuwo Dowladda Somaliya, ayaa weeraray hoygan oo ku yaala Degmada Hodan, iyagoo baaritaano sameeyay qaybaha uu ka kooban yahay hoygaasi.
Senator Cabdi Xasan Cawaale oo ah Gudoomiyaha Guddiga Dastuurka ee Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegay in hoygiisa ay soo weerareen Ciidanka Dowladda, kuwaa oo gaarigii ay wateen ku jebiyay albaabka guriga, ka dibna ay qoryo ku qabteen ilaaladii guriga, iyagoo ka qaaday hubkii ay haysteen, sida uu yiri.
Cabdi Qaybdiid oo shir jaraa’id ku qabtay hoygiisa, ayaa tibaaxay in gurigiisa la soo weeraray xilli uu shaqo ku maqnaa, isagoo intaa ku daray in la jebiyay dhammaanba albaabada ku yaala gurigiisa, ka dibna baaritaan lagu sameeyay.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in la xir xiray dadkii guriga ku sugnaa, lagana qaaday teleefanadii ay wateen, oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo gabar uu dhalay. Waxa kaloo uu sheegay xaaskiisa in suuliga/musqusha lagu jebiyay, dabadeedna galay.
Dhanka kale Cabdi Qaybdiid, ayaa sheegay in uu soo la xiriiray Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan waxa uu ii sheegay buu yiri ciidankaas waxa ay ahaayeen Ciidanka Emirate-ka, balse uu tuhmayo ciidanka soo weeraray inay yihiin ciidan dowladeed, wixii intaasi dheerna lagu ogaan doono baarinada la samaynayo, sida uu yiri.
General C/weli Jaamac Xuseen (Gorod) oo ka Hadlay Weerarkii Hoyga Cabdi Qaybdiid
Wasiirka Amniga oo ka hadlay baaritaankii lagu sameeyay guriga Senator Qeybdiid